रुस्लान थ्री स्टारलाई आहा रारा गोल्डकप उपाधि ! | Hamro Khelkud
रुस्लान थ्री स्टारलाई आहा रारा गोल्डकप उपाधि !
शनिबार, फागुन १८, २०७५
पोखरा (हाम्रो खेलकुद) – रुस्लान थ्री स्टार क्लबले अाहा रारा गोल्डकपको उपाधि जितेको छ । त्रिभुवन अार्मी क्लबलाई सडन डेथमा ५-४ ले पराजित गर्दै थ्रीस्टार च्याम्पियन बनेको हो । निर्धारित समय १-१ को बराबरीमा र अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले १-१ गोल थपेपछि खेल टाइब्रेकरमा पुगेको थियो ।
अार्मीका लागि टेकबहादुर बुढाथोकीले खेलको पाँचौ मिनेटमा नै गोल गरेका हुन् । दायाँ विङबाट अाएको क्रसलाई ६ यार्ड बक्सभित्र अनमार्क रहेका टेकबहादुर सहजै हेडरमार्फत गोल गरेका थिए ।
पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा अन्नत तामाङको क्रसमा दीपक गुरुङले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र ह्यान्ड गरेपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए । उक्त पेनाल्टीमा रञ्जित धिमालले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
अतिरिक्त समयको पहिलो हाफमा अार्मीका विमल पाण्डेले गोल गर्दै अार्मीलाई अग्रता दिलाए । तर दोस्रो हाफमा पिटर सेगुनले गोल गर्दै खेल पुन: बराबरीमा ल्याए । त्यसअघि खेल १-१ को बराबरीमा छँदा सुनील बल रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएका थिए । अार्मीले पनि सुचिमा नभएका अाशीष शाक्य मैदान छिराएपछि केहिबेरमा नै निश्कासन गरेको थियो ।
अार्मीका लागि भरत खवास, जर्जप्रिन्स कार्की, सन्तोष तामाङ र टंक बस्नेतले गोल गरे । अार्मीका विकेश कुथु र विकास खवासको प्रहार एलन न्यौपानेले बचाए । थ्री स्टारका रञ्जित धिमाल, रुपेश केसी, विक्रम लामा, अन्नत तामाङ र मिक्छेन तामाङले गोल गर्दा सुशील राईको प्रहार क्रसबारमा लागेर फर्कियो ।
यो थ्री स्टारको पाँचौ उपाधि हो । अार्मी भने हालसम्म अाहा रारा गोल्डकपमा उपाधिविहिन रहेको छ ।